Medicines for kids ကလေးသုံးဆေးများ - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
မေးခွန်းတွေမှာ မကြာခဏတွေ့ရတဲ့ ဘိုင်အိုဂျက်ဆစ်ဆေးထဲမှာ အက်စီတာမိုင်နိုဖန် ခေါ် ပါရာစီတမောနဲ့ အင်တီဟစ်တမင်းဆေး ၂ မျိုးပါတယ်။ အအေးမိတာအတွက် သုံးတာများတယ်။ ကလေးတွေကို အများဆုံး ရောဂါရစေတာက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေသာဖြစ်တယ်။ နှာစေးအအေးမိတာ၊ ဝမ်းပျက်တာ၊ ကိုယ်ပူတာတွေကို ဖြစ်စေတယ်။ ပါရာစီတမောဟာ နာတာနဲ့ ဖျားတာအတွက် ထိရောက်တဲ့ဆေးဖြစ်တယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ ကိုယ်ပူတာအတွက်ပါ ပေးနိုင်တယ်။ ဘယ်နှစ်ရက်တိုက်ပါလို့ မရှိပါ။ လိုအပ်ချိန်မှာတိုက်၊ မလိုတာနဲ့ ရပ်လိုက်လို့ရတယ်။ ဆေးများရင် အသည်းကိုထိခိုက်တယ်။
Paracetamol (120 mg/5 mL) ပါရာစီတမောဆေးရည်
၂-၃ လအရွယ်၊ လစေ့မွေးထားတဲ့ကလေး၊ ၄ ကေဂျီကျော်ကလေး၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ ကိုယ်ပူတာနဲ့ နာတာအတွက် 2⋅5 mL တကြိမ်၊ (သို့) ၄-၆ နာရီခြားပြီး နောက်တကြိမ်။ တနေ့မှာ ၂ ခါထက်ပိုမပေးရ၊ တခါနဲ့တခါ ၄ နာရီထက် မနီးရ။ ဆရာဝန်မညွှန်ဘဲ ၃ ရက်ထက်ပိုမပေးရ၊
• ၃-၆ လအရွယ်၊ ကိုယ်ပူတာ၊ နာတာတွေအတွက် 2⋅5 mL တနေ့ ၄ ကြိမ်၊
• ၆-၂၄ လ အရွယ်၊5mL တနေ့ ၄ ကြိမ်၊
• ၂-၄ နှစ် အရွယ်၊ 7⋅5 mL တနေ့ ၄ ကြိမ်၊
• ၄-၆ နှစ်အရွယ်၊ 10 mL တနေ့ ၄ ကြိမ်၊
ဗက်တီးရီးယားတွေကနေဖြစ်တာဆိုရင်တော့ ပိုးသေဆေးတခုခုလိုပြီ။ ပိုးသေဆေးတွေ အများကြီးရှိတော့ ရွေးတတ်ရမယ်။ အသုံးများတာတခုကတော့ Azithromycin ဆေးဖြစ်တယ်။
နားအလည်ပိုင်းရောင်ခြင်း၊ အာသီးရောင်ခြင်း၊ အာခေါင်ရောင်ခြင်း၊ လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊ ဆိုင်းနူဆိုက်တစ်၊ ခရီးသွားဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ကြက်ညှာချောင်းဆိုးရောဂါတွေအတွက် ပေးနိုင်တယ်။ အစာမစားမီ ၁ နာရီ၊ စားပြီး ၂ နာရီ ပေးသင့်တယ်။ အဇစ်သရိုမိုင်စင်ကလေးတွေအတွက် ဆေးရည်မှာ 100mg/5mL နဲ့ 200mg/5mL လာတယ်။
10 kg အလေးချိန် = တနေ့ 2.5 ml
12 kg အလေးချိန် = တနေ့3ml
14 kg အလေးချိန် = တနေ့ 3.5 ml
16 kg အလေးချိန် = တနေ့4ml
17 – 25 kg အလေးချိန် = တနေ့5ml
26 – 35 kg အလေးချိန် = တနေ့ 7.5 ml
36 – 45 kg အလေးချိန် = တနေ့ 10 ml
> 45 kg အလေးချိန် = တနေ့ 12.5 ml
အမောက်ဆာစလင်ဆေးကိုလည်း ကလေးတွေအသုံးများတယ်။ နားပြည်ယိုခြင်း၊ နားအလယ်ပိုင်းရောင်ခြင်း၊ လည်ချောင်းရောင်ခြင်း၊ ဆိုင်းနပ်စ်၊ အာသီးရောင်ခြင်း၊ လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ အသံပြွန်ရောင်ခြင်း၊ လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊ ဆီးလမ်းကြောင်းရောင်ခြင်း၊ အရေပြားနာ၊ ဂနိုရီးယား၊ သည်းခြေလမ်းရောင်ခြင်း၊ နှလုံးသားရောင်ခြင်း၊ သွားပိုးဝင်၍ပြည်တည်ခြင်း၊ အစာလမ်းအစ လေနာဖြစ်ခြင်းတွေအတွက် ပေးနိုင်တယ်။
ဆေးမှုံ့ကို ရေနဲ့ဖျော်ပြီးနောက် ၁ဝ ရက်အတွင်းသာသုံးပါ။ အစာနဲ့နီးနီးဝေးဝေး ပေးနိုင်တယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပျောက်သွားပေမယ့် ဆေးပတ်လည်အောင်ပေးရမယ်။ ဆေးပြီးခြင်း ဆေးကို ပိုးကခံနိုင်ရည်ဖြစ်သွားတာကနေ ကာကွယ်ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ အမောက်ဆာစလင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ = ဝမ်းပျက်၊ အရေပြားအနီပြင်ထွက်၊ ဆေးမတည့်ဖြစ်ခြင်း။
ကလေးတွေ သေဆုံးရခြင်းရဲ့ အကြီးမားဆုံး အကြောင်းခံရောဂါဖြစ်တယ်။ ၅ နှစ်အောက် ကလေးပေါင်း တနှစ်မှာ ၁့၆ သန်း သေဆုံးနေကြရရှာတယ်။ ဒါဟာ ဒီအရွယ်ကလေးတွေ သေးဆုံးရမှု စုစုပေါင်းရဲ့ ၁၈% ရှိတယ်။
1. Amoxicillin: dispersible, scored tablets 250 mg and 500 mg or equivalent flexible oral solid dosage form, in blister packs of 10
2. Ampicillin: powder for injection 500 mg and 1g
3. Ceftriaxone: powder for injection 250 mg and 1 g
4. Gentamicin: injection 20 mg/ml
5. Oxygen: medicinal gas
6. Procaine benzylpenicillin: powder for injection 1 g and3g
Diarrhoea ဝမ်းလျှော ဝမ်းပျက်
ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်တာဟာ ကလေးတွေသေဆုံးရခြင်းထဲမှာ ဒုတိယလိုက်တယ်။ ၅ နှစ်အောက် ကလေးတွေ အအာဟာရ ချို့တဲ့ရခြင်းရဲ့ ပင်မအကြောင်းခံလဲ ဖြစ်တယ်။ နှစ်တိုင်း ကလေးပေါင်း ၁့၃ သန်း သေဆုံးနေကြရရှာတယ်။
1. Oral Rehydration Salts (ORS): sachets of 200 ml; 500 ml and1 litre, appropriate flavour
2. Zinc: 20 mg scored dispersible tablet or equivalent flexible oral solid dosage form
Neonatal sepsis တနှစ်အောက်ကလေး ပိုးဝင်ခြင်း
တကမ္ဘာလုံးမှာ တနှစ်အောက် ကလေးပေါင်း ၃့၆ သန်း သေဆုံးနေကြရတဲ့အထဲမှာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ရောဂါပိုးဝင်လို့ သေရတာက ၄ ပုံ ၁ ပုံရှိတယ်။ ၅၂၈ဝဝဝ ယောက်ဟာ တနှစ်အောက်ကလေး ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် သေကြရတယ်။
1. Ceftriaxone: powder for injection 250 mg and 1 g
2. Gentamicin: injection 20 mg/ml
3. Procaine benzylpenicillin: powder for injection 1 g and3g
Vitamin A deficiency ဗီတာမင် (အေ)
ဝက်သက်ရောဂါ နဲ့ ဗီတာမင် (အေ) ချို့ယွင်းတာ ဆက်စပ်နေတယ်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တုံးက ကလေးပေါင်း ၁၆၄ဝဝဝ ယောက် ဝက်သက်နဲ့ သေဆုံးခဲ့ကြတယ်။ အများအားဖြင့် ၅ နှစ်အောက်ကလေးတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ Vitamin A: capsule 100 000 IU strength; 200 000 IU strength
၅-၃ဝ ကေဂျီ ကိုယ်အလေးချိန်ရှိတဲ့ ကလေးတွေအတွက် ဆေးပေးရလွယ်ကူစေသင့်တယ်။ ဆေး ၁ ခြမ်း၊ ၁ ပြား၊ ၁ ပြားခွဲ၊ ၂ ပြားပေးနိုင်တဲ့ Rifampicin 250 mg, Isoniazid 150 mg, Pyrazinamide 400 mg and Ethambutol 250 mg ဆေးတွေ တွဲထားတာမျိုး။
1. Ethambutol: 20 mg/kg/day (15 mg to 25 mg/kg/day)
2. Rifampicin: 15 mg/kg/day (10 to 20 mg/kg/day)
3. Isoniazid: 10 mg/kg/day (10 to 15 mg/kg/day)
4. Pyrazinamide: 35 mg/kg/day (30 to 40 mg/kg/day)
Neonatal care တနှစ်အောက်ကလေးများအတွက်
1. Caffeine citrate: liquid 20mg/ml
Cord care ချက်ကြိုးဂရုစိုက်ခြင်း
1. Chlorhexidine digluconate: solution, 4%